Izinto ezi-5 azivumelekanga kubudlelwane | IBezzia
Izinto ezi-5 azivumelekanga kubudlelwane
UMaria Jose Roldan | 06/07/2021 22:00 | Ubudlelwane
Kwababini okanye kubudlelwane, kukho izinto ezininzi ezingavumelekanga nakweyiphi na imeko. Ukuba oku kuyenzeka, ubudlelwane buyekile ukuba sempilweni kwaye buba yityhefu, ngako konke okubi oku kuthetha ukuba.
Amalungu obudlelwane obuthile kufuneka ahlale esebenza njengeqela kwaye funa intlalontle ethile ethanda eso sibini. Kwinqaku elilandelayo sikubonisa okungafanelekanga ukuba kuvunyelwe kwisibini, ukunqanda iingxaki ezithile ezinokuphelisa oko.
1 Ukunyanzelwa kwabahlobo
2 Ingxolo kunye nobundlongondlongo
3 Akukho buxoki
4 Ukungabikho kwemfihlo kunye nenkululeko
5 Ukunyanzelwa ngesondo
Kuqhelekile ukuba umntu ngamnye owenza isibini esithile abe nesangqa sabahlobo abafuna ukugcina. Yintoni engavunyelwanga nangaliphi na ixesha elinye lala maqela kubudlelwane, ukubeka ukuba ngabaphi abahlobo abanokubona nabangabonisi. Umntu ngamnye kufuneka abe nenkululeko eyaneleyo kunye nokuzimela ukuze akwazi ukuhlangabezana nawuphina umntu amfunayo.
Ingxolo kunye nobundlongondlongo
Ukumemeza nokulwa akunakuvunyelwa ukuba kuqheleke phakathi kwesi sibini nangaliphi na ixesha. Ubundlongondlongo kukungabi nantlonelo ngomnye umntu okungafanelekanga ukuba kuvunyelwe phantsi kwazo naziphi na iimeko.
Kubalulekile ukunciphisa ubudlelwane obukwi-bud ukuba ubundlongondlongo kunye nokukhwaza kuya kuba yinto eqhelekileyo phakathi kwesi sibini. Yinto engafanelekanga ukuba yenzeke, nangona ngelishwa kwenzeka okungaphezulu kunokuba ubungathanda.
Akunakubakho buxoki kubudlelwane obuthile kuba kungenjalo buya kwaphula ixabiso elibaluleke njengokuthenjwa. Ubuxoki benza ingozi enkulu kulo naliphi na iqabane kwaye akufuneki bavunyelwe ngalo naliphi na ixesha.
Ukungabikho kwemfihlo kunye nenkululeko
Izibini ezininzi zenza impazamo enkulu yokuvalelisa kwimfihlo kunye nenkululeko xa kufikwa ekugananeni. Ukuba nobudlelwane akuthethi ukuba amaqela akanakuba nendawo yawo yobuqu. Isibini esisempilweni kufuneka sikhululeke ukuba sikhuphe unxibelelwano kwaye senze oko sicinga ukuba kufanelekile, Ukongeza ekubeni nemfihlo ethile kwiinkalo ezahlukeneyo zobomi bakho.
Ukwabelana ngesondo kufuneka kube yinto emibini kwaye kunganyanzeliswa lelinye iqela. Ngelishwa namhlanje, basekho abantu basetyhini abaphantsi kwaye baphathwa gadalala xa kufikwa kumba wesondo. Kubudlelwane obuphilileyo, omnye wabachaphazelekayo kufuneka ahloniphe ngamaxesha onke ukuba iqabane lakhe aliziva lithanda ukwabelana ngesondo kwaye lishiyele apho kufanelekileyo.
Ngamafutshane, ayisiyiyo yonke into ehamba nesibini kwaye uthotho lwemida kufuneka lusekwe ukuze ubudlelwane buhlale busempilweni kangangoko. Esi sibini yinto yesibini kwaye kubalulekile ukubeka yonke inyama kwi-grill kwaye bobabini bonwabele impilo-ntle ethile. Phambi kwawo nawuphi na umqondiso owenza isibini sigxadazelise, kufanelekile ukusikroba kwi-bud kwaye ungavumeli nangaliphi na ixesha ukuba iindlela ezahlukeneyo zokuziphatha ezinokuhlala kwesi sibini. Ubudlelwane kufuneka busekwe kwixabiso njengoko libalulekile imbeko, unxibelelwano okanye ukuthembela kunye nokufezekisa ulungelelwaniso olukhulu kuyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Psychology kunye nesibini » Ubudlelwane » Izinto ezi-5 azivumelekanga kubudlelwane
Iincwadi ezi-4 kunye neencwadi ukuqonda ubuncinci
Ukuphulukana kanjani nesisu ngohlobo lwesisu